हामी भारतका सबैभन्दा सफल व्यापारी र लगानीकर्ताहरू मध्ये एक, राकेश झुनझुनवालाको व्यापार र लगानी रणनीतिहरू बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। त्यसोभए, व्यापार मार्फत ठूलो पैसा कमाउने झुनझुनवालाजे वास्तवमा बजारमा कसरी व्यापार गर्छन्? के उनले बजारमा व्यापार गर्दा प्राविधिक विश्लेषण प्रयोग गर्छन? के प्राविधिक विश्लेषणले बजारमा नाफा कमाउन मद्दत गर्न सक्छ? राकेशले व्यापार गर्दा कस्तो रणनीति अपनाउनुहुन्छ? हाम्रो यो लेखमा यी सबै बुझौं।
एक पटक सम्मेलन चलिरहेको थियो, जहाँ व्यापार र लगानी जस्ता विषयहरूमा छलफल भइरहेको थियो। यहाँ एकजना व्यक्ति आएर भने, “व्यापारको कुरा नगरौं, व्यापारबाट कसले कमाउँछ? लगानीको चर्चा गरौं। लगानी गरेर मात्रै कमाउन सकिन्छ, व्यापार गरेर होइन।” राकेशले यो सुन्नेबित्तिकै उक्त व्यक्तिलाई गाली गर्दै भने, “म बजारमा जम्मा ५००० रुपैँया लिएर आएको हुँ ।सुरुमा मैले मेरो पूँजी ट्रेडिङबाट मात्रै पाएको थिए र यदि तपाईंले व्यापार गरेर कमाउन सक्नुहुन्न भने मलाई पैसा कसले दियो, तपाईंको बुबा वा मेरो। किनभने सुरुमा मैले व्यापार गरेर मात्रै ठूलो पैसा कमाएको छु ।”
झुनझुनवालाएक लगानीकर्ता मात्र होइन, उनी एक स्टक ट्रेडर पनि हुन्। आफ्नो सुरुका दिनहरूमा, उनले व्यापार मार्फत धेरै पैसा कमाए र त्यसपछि उनले त्यो पैसा लामो अवधिको लागि लगानी गरे पछि यो पैसाले उनको लागि अचम्मको काम गर्यो। साधारणतया, यसको अर्थ उनले लगानी गरेको पैसाले पछि उसलाई ठूलो प्रतिफल दियो।
झुनझुनवालासँग दुईवटा दिमाग छन् एउटा लगानी गर्ने मस्तिष्क र अर्को व्यापारिक मस्तिष्क। राकेशले जहिले पनि लगानी गर्छन उसले आफ्नो लगानी गर्ने दिमाग प्रयोग गर्छन , लगानी नियमहरू पालना गर्छन ।
लगानी गर्दा नगद प्रवाह विवरण, ब्यालेन्स शीट, आधारभूत विश्लेषण आदि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। उनलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ, त्यसैले पालना पनि गर्छन | त्यसै गरी, जब उनले व्यापार गर्दछन उनले आफ्नो व्यापारिक दिमाग प्रयोग गर्दछन र व्यापार नियमहरू पालना गर्दछ। ट्रेन्ड एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इत्यादि ट्रेडिङ गर्दा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै उनले ट्रेड गर्दा गर्छन।
आज सम्म भएका सबै सम्मेलनहरू, अन्तर्वार्ताहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, पार्टीहरू, आदि, राकेशले आफ्नो सफल व्यापार मन्त्र सधैं, जताततै, प्रत्येक पटक उल्लेख गरेका छन्। र त्यो व्यापारिक मन्त्र हो, “बढ्दै गर्दा लिनु, घट्दै गर्दा बेच्नु।” अनुवाद गर्दा यसको अर्थ, शेयर अपट्रेन्डमा हुँदा किन्नुहोस् र शेयर डाउनट्रेन्डमा जाँदा मात्र बेच्नुहोस्।
टिभि अन्तर्वार्ताको क्रममा पत्रकारले झुनझुनवालालाई सोधे, “तपाईंले आफ्नो व्यापार कसरी गर्नुहुन्छ ? तपाइँ कुन व्यापार रणनीति अनुसरण गर्नुहुन्छ? तपाईंको व्यापारको गोप्य सूत्र के हो र यो बढ्दै गर्दा लिनु, घट्दै गर्दा बेच्नु के हो? व्यापार गर्दा तपाईले पहिलो कुरा के देख्नुहुन्छ? हामीलाई यसको बारेमा बताउनुहोस्। ” यसको जवाफमा झुनझुनवालाजेले भने, “व्यापार गर्दा सबैभन्दा पहिले उसले बजारको फराकिलो दिशा देख्छ र त्यसका लागि सबै समय स्क्रिन अगाडि बसिरहनु पर्दैन । त्यसोभए बढ्दै गर्दा लिनु अर्थ अपट्रेन्डमा रहेको शेयर किन्नु र बढ्दै गर्दा लिनु, घट्दै गर्दा बेच्नु भनेको डाउनट्रेन्डमा रहेको शेयर बेच्नु हो ।
अब झुनझुनवालालाई सोधियो कि तपाईले र बढ्दै गर्दा लिनु भन्नुको मतलब यति महँगो शेयर किन्ने सुझाव दिनुहुन्छ ? यसमा श्री झुनझुनवालाजेले जवाफ दिए, “किन हुन्न। कसले भन्यो शेयर महँगो ? किनभने यदि त्यो सेयर अपट्रेन्डमा जारी रह्यो भने, पछि तपाईंले देख्नुहुनेछ कि तपाईंले जुन मूल्यमा यसलाई किन्नु भएको थियो त्यो महँगो थिएन। यो एउटा यस्तो नियम हो, जसलाई अधिकांश व्यापारीहरूले पालना गर्दैनन्, त्यसैले बजारमा रहेका १० लाख व्यापारीमध्ये १०० जना व्यापारीले मात्रै पैसा कमाउँछन् ।”
राकेशले विश्वास गर्छन् कि यदि उसले लगभग १०० ट्रेड गर्छ भने, ती मध्ये ४० मात्र आफ्नो पक्षमा भए व्यापारमा गल्ती भयो भनि तुरुन्तै घाटा स्विकारेर व्यापारबाट बाहिर निस्कने उनी बताउँछन् । उनि विश्वास गर्छन , एक राम्रो व्यापारीको रूपमा, हामीले गलत व्यापारबाट कहिले बाहिर निस्कने भनेर जान्नुपर्छ। झुनझुनवालाझुनझुनवालाले रु. १०० मा शेयर किने र ९० उसले ट्रेडबाट बाहिर निस्कन सुनिश्चित गर्दछ यदि त्यो ट्रेडमा स्टप-लस हिट भयो भने। यदि उसले व्यापार छोडेन भने, ऊ शान्तिसँग सुत्न सक्षम नहुन सक्छ त्यसैले स्टप लस सुझाउछन ।
यहाँ रमाइलो कुरा के छ भने राकेसले १०० ट्रेड गरेमा त्यसमध्ये ४० मात्रै नाफा हुने विश्वास गर्छन्, जबकि बजारमा अन्यले आफ्नो १००/१०० ट्रेड सही होस् भन्ने चाहन्छन्, गल्ति यहि लगानी कर्ता गर्छन |
हामी बजारमा यस्ता व्यापारीहरू पनि भेट्छौं जसले मूल्य घट्दा सेयर किन्छन् र मूल्य अझै घट्दा अझै धेरै सेयर किन्छन्। अनि सोध्दा तिमी किन यस्तो गर्छौ ? उनीहरु ‘औसत’ रहेको भन्दै जवाफ दिन्छन् । झुनझुनवालालाई सोधियो कि यदि तपाईको व्यापार घाटामा जान्छ भने, के तपाई आफ्नो व्यापारको औसत गर्नुहुन्छ? यसको जवाफमा उनले भने, “म कहिल्यै औसत गर्दिन।”
हामीले यहाँ सिकेको पाठ यो हो कि, व्यापार गर्दा, तपाइँको व्यापार गलत भएको अवस्थामा तपाइँ ट्रेडबाट बाहिर निस्कनु भएको पहिले नै निर्धारण गर्नुहोस्।
जब झुनझुनवालाजे लाई सोधियो कि तपाईले सेयर किन्दा सेयर किन्नु हुन्छ र त्यो ट्रेड नाफामा जान्छ तब तपाई यस्तो ट्रेडबाट कहिले निस्कनुहुन्छ ? तपाईंले सेट गर्नुभएको लक्ष्य के हो? त्यसमा उनी टार्गेट भन्दै हाँसे ? लक्ष्य के हो? म टिभी कार्यक्रमहरूमा पनि देख्छु, मानिसहरूले सेयरको लागि लक्ष्य मूल्य दिइरहेका छन्। कसैले कसरी यस्तो कुराको भविष्यवाणी गर्न सक्छ वा त्यसको लागि कसैले कसरी कुनै कुराको भविष्यवाणी गर्न सक्छ? त्यसैले उनले यस प्रश्नको जवाफ दिए, “जब उनले सेयर किन्छन र त्यो व्यापार नाफामा जान्छ, उसले त्यो शेयर माथिको ट्रेन्डमा नहुँदासम्म होल्ड गर्न निश्चित गर्दछ। उनले भने, ‘सेयरले डाउनट्रेन्डमा गएको जनाउँदैन अर्थात् त्यस शेयरमा केही प्राविधिक कमजोरी नभेटिएसम्म वा चार्टले बिक्रीको सङ्केत नदेखाएसम्म आफूले सेयर राखेको छु ।”
यसको मतलब यो हो कि व्यापार गर्दा, यदि हाम्रो भविष्यवाणी गलत भयो भने, हामीले सही समयमा ट्रेडबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र हामी लाभदायक ट्रेडमा हुँदा हामीले सेयर अपट्रेन्डमा नभएसम्म त्यो ट्रेडलाई होल्ड गर्नुपर्छ। तर अधिकांश व्यापारीहरू ठीक उल्टो गर्छन्। जब तिनीहरू घाटामा हुन्छन्, तिनीहरू त्यहाँ धैर्यपूर्वक पर्ख्छन् र तिनीहरूले कुनै व्यापारमा केही नाफा कमाउँछन्, तिनीहरू तुरुन्तै नाफा लिन्छन् र त्यो लाभदायक व्यापारमा समात्नुको सट्टा छोड्छन्। जसले गर्दा घाटा बढ्छ र नाफा हुँदैन ।
सेयर बजार कारोबार जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो भन्ने तथ्यलाई बुझ्दै झुनझुनवालाराम्ररी जानकार छन् | उनको जीवनमा यस्ता वर्षहरू थिए जहाँ उनले बजारबाट राम्रो पैसा कमाउन सकेनन्। तर उनलाई थाहा थियो कि जब बजार कम मूल्याङ्कनबाट बढ्छ र यदि हामीले सो अनुसार लगानी गर्छौं भने, हामी राम्रो पैसा कमाउन बाध्य छौं। र, यसअघि पनि पटकपटक गरेर प्रमाणित गरिसकेका छन् । भनाइ छ, “फलाम तातो हुँदा प्रहार गर्नुहोस्।” त्यसोभए यदि सेयर अपट्रेन्डमा छ भने मोमेन्टम पनि अपट्रेन्डमा छ र तपाईंले दोस्रो पटक पुन: खरीदको संकेत पाउनुभयो भने झुनझुनवालात्यहाँ पिरामिड गर्न थाल्छन् अर्थात् उसले त्यहाँ सेयरहरू जम्मा गर्न थाल्छन ।